निषेधाज्ञा खुलेसँगै बढ्यो संक्रमण, यस्ता छन् कारण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
निषेधाज्ञा खुलेसँगै बढ्यो संक्रमण, यस्ता छन् कारण
श्रावण ८, २०७८ रासस
काठमाडौँ — निषेधाज्ञा खुलेसँगै कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ पनि उकालो लागको छ । पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्दा संक्रमणदर उकालो लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सरकारले निषेधाज्ञालाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेसँगै संक्रमणको दर पनि बढ्दै गएको पाइएको हो । निषेधाज्ञा खुलेसँगै भीडभाड तथा जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू नगर्नेजस्ता कारणले संक्रमणको दर बढेको पाइएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले साउन लागेपछि मानिसको आउजाउ बढेपछि संक्रमणदर पनि बढिरहेको बताए । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू गर्न, भीडभाड नगर्न र सामाजिक दूरी दुई मिटर कायम गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि मानिसले लत्याएका छन् । यसबाट संक्रमण दर क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ ।
'खुकुलो भएसँगै संक्रमण हुने दर बढिरहेको छ । विगत एक हप्तादेखि सङ्क्रमित हुने दर बढ्दो रहेको छ,' उनले भने, 'संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गरे पनि भीडभाड गर्ने र जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू नगर्दा संक्रमण जति घट्नुपर्ने हो त्यति घट्न सकिरहेको छैन ।'
सरकारले गत असार २२ गतेदेखि सबै प्रकारका व्यवसाय खुला र जोरबिजोर हटाउँदै सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाएको हो । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै गत वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको अवस्थामा अझै पनि बुझी नबुझी लुकीछिपी वा खुल्लमखुला जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड उल्लंघन भइरहेको जनाएको छ । उहाँका अनुसार अहिले दैनिक परीक्षण गरिएकामध्ये २२ प्रतिशतमा संक्रमणदर रहेको छ । नेपालमा शुरुदेखि अहिलेसम्मको संक्रमणदर भने १९.३ प्रतिशत रहेको छ ।
संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै दैनिक एक हजार ८०० मा झरे पनि अहिले त्यो क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । अहिले त्यो सङ्ख्या बढेर तीन हजार पुगेको छ । साउन १ गते १४ हजार १८२ जनाको परीक्षण गर्दा दुई हजार ९३६ मा संक्रमण देखिएकामा बिहीबार साउन ७ गतेसम्म आइपुग्दा दुई हजार ७१४ पुगेका छन् ।
यस्तै साउन २ गते १० हजार ६६ परीक्षण हुँदा एक हजार ८७५, ३ गते नौ हजार ६२८ परीक्षण गर्दा एक हजार ८०१, ४ गते ११ हजार ६६४ परीक्षण हुँदा दुई हजार ४४५, ५ गते १३ हजार १३५ परीक्षण हुँदा तीन हजार १०८ र साउन ६ गते दुई हजार ८३८ जना संक्रमित भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुने सङ्ख्या १८ सम्ममा झरे पनि बिहीबार २४ जनाको संक्रमणबाट निधन भएको छ । यसैगरी सबभन्दा बढी संक्रमणदर हुने प्रदेशमा प्रदेश नं १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम रहेका छन् । ती प्रदेशमा परीक्षण गरिएकामध्ये दुई जनामा एक जना संक्रमित पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारीले बताए ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. सागरराज भण्डारी निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै जोखिम बढेको बताउँछन् । उनले परीक्षणको दायरा कम र खुकुलो भएसँगै मानिसको भीडभाड भएकाले नेपालमा संक्रमणको जोखिममा अझै रहेको बताए । 'मानिस घरमै बसेर संक्रमणलाई लुकाइरहेका छन् । संक्रमण भए पनि आइसोलेशनमा बसेका छैनन्,' उनले भने, 'जसले गर्दा घरपिच्छै सबै मानिसमा संक्रमण हुने डर छ ।'
खोप लगाएका मानिसबाट पनि संक्रमण सर्ने जोखिम उत्तिकै रहेको उनी बताउँछन् । 'खोप लगाएका मानिस केही हुँदैन भन्दै जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू गरिएको देखिएको छैन,' उनले भने, 'खोपले संक्रमणलाई नै रोक्ने होइन । संक्रमणको लक्षणलाई मात्र कमी गराउने हो ।' नेपालमा पहिलो लहर सकिए पनि गत चैतको दोस्रो हप्तादेखि संक्रमणको दोस्रो लहर आएको थियो । दोस्रो लहरले मानिसको जनजीवन असामान्य बनाएको थियो । संक्रमणको दोस्रो लहरले फोक्सोमा असर पुर्‍याएर अक्सिजनको मात्रा घटाउने र निमोनियाजस्ता रोग लागेका थिए । जनस्वास्थ्यविद् भण्डारीका अनुसार भारतमा संक्रमणको दर बढिरहेकाले नेपालमा जोखिम बढेको छ । खुला सीमाका कारण भारतबाट संक्रमण फैलने डर पनि छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोला खुकुलो भएसँगै मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा जोखिम रहेको बताउँछन् । 'खोपले लगाएको चारदेखि छ हप्तासम्म काम गर्दछ,' उनले भने, 'खोप लगाएकाले पनि स्वास्थ्यमा मापदण्ड लागू नगर्दा त्यो बीचमा जोखिम नै हुन्छ ।'
अहिले ५०० भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला १० वटा रहेका छन् । तिनमा मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, नवलपरासी (पूर्व) र रुपन्देही रहेका छन् । यही साउन ६ गते मात्र नवलपरासी (पूर्व), रुपन्देही र कास्की प्रत्येकमा ५०० भन्दा बढी संक्रमित थपिएका हुन् । यसैगरी २०० भन्दा बढी संक्रमित हुने जिल्ला २६ पुगेका छन् । मन्त्रालयले अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यस हप्ता २०० भन्दा बढी संक्रमण हुने जिल्ला धेरै थपिएको जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमणदर बढ्दो रहेको छ । उपत्यकामा भीडभाड र सवारी साधन चलेसँगै संक्रमण पनि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साउन १ गते उपत्यकामा संक्रमित सङ्ख्या ५४१ पुगेकामा साउन ७ गते ७५१ पुगेको छ । साउन १ गते उपत्यका काठमाडौंमा ३४३, ललितपुरमा १३६ र भक्तपुरमा ६२ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । साउन ७ गते काठमाडौंमा ५३६, ललितपुर १३० र भक्तपुर ८५ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौंमा अहिलेसम्म दुई लाख १२ हजार १५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अहिले काठमाडौंमा पाँच हजार ९१६ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । त्यसैगरी ललितपुरमा कुल संक्रमित ३९ हजार ५९६ र एक हजार ६१ सक्रिय संक्रमित तथा भक्तपुरमा २३ हजार ४४२ संक्रमित र ९३५ सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
संक्रमण बढेसँगै निको हुने दर पनि स्थिर रहेको छ । साउन १ गते निको हुने दर ९४.५ प्रतिशत रहेको थियो । साउन ७ गते पनि निको हुने दर साउन १ गतेकै जस्तो ९४.५ रहेको छ । अहिले निको हुने दर बढ्न सकेको छैन । साउन २ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्मको ९४.७ प्रतिशतमा स्थिर रहेको थियो । साउन २ गते ९४.७ प्रतिशत, ३ गते ९४.७ प्रतिशत, ४ गते ९४.७ प्रतिशत, ५ गते ९४.६ प्रतिशत ६ गते निको हुने दर ९४.६ प्रतिशत रहेको छ ।
खोप अभियान जारी
नेपालमा अहिलेसम्म भारत, चीन र अमेरिकाबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आएको छ । ती खोप प्राथमिकतानुसार मन्त्रालयले नियमितरूपमा नागरिकलाई लगाइरहेको छ । कोभिसिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप नेपालमा लगाइएका छन् । अहिलेम्म नेपालमा ६५ लाख ८२ हजार ८५० मात्रा खोप आइसकेको छ । सरकारले साउन १५ गतेभित्र ३२ लाख मात्रा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ चीनबाट ल्याउने भएको छ ।
पहिलो मात्रा लगाउने ३३ लाख आठ हजार ७३० र दोस्रो मात्रा लगाउने १२ लाख ८१ हजार २४० जना पुगेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म सात लाख २७ हजार १६९ संक्रमित पुगेका छन् । अहिले सघन उपचारकक्षमा ६३५ र भेन्टिलेटरमा १७२ जना रहेका छन् । यस्तै संक्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या ६ लाख ३७ हजार ६९० पुगेको छ । यस्तै संक्रमणबाट हालसम्म ९ हजार ६६१ जनाको निधन भइसकेको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १२:४२
धारचुला पस्दा भारतीय स्वास्थ्यकर्मीबाटै परीक्षण, गड्डाचौकीबाट जाँदा नचाहिने
श्रावण ८, २०७८ मनोज बडू, भवानी भट्ट
दार्चुला/कञ्चनपुर — भारतले कोरोना परीक्षणबिना प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि कुनै नाकामा आफैं परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ । कुनै नाकामा भने रिपोर्टबिनै आउजाउ गर्न दिएको छ ।
दार्चुला सदरमुकामस्थित नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगे पुलमा भारत जान लागेका नेपाली । तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर
दार्चुलाको सीमापारि भारत पिथौरागढ जिल्लाको धारचुलामा झोलुंगे पुलछेवैमा हेल्थ डेस्क राखिएको छ । उक्त डेस्कमा परीक्षण गरेरमात्र भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली कामदारलाई प्रवेश अनुमति दिने गरेको छ ।
सीमावर्ती धारचुला र त्यहाँबाट भारतका अन्य ठाउँ जानेलाई परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । परीक्षण भने भारतीय हेल्थ डेस्कले नै गरेको छ । यसअघि गत असारसम्म पनि धारचुला प्रवेशमा नेपालीलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य थियो । भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले अन्य राज्यबाट प्रदेश गर्दा ७२ घण्टाभित्रको कोरोना नेगेटिभ भएको रिपोर्ट हुनुपर्ने व्यवस्था स्वास्थ्य निर्देशिकामा गरेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार धारचुला तहसिलले नेपाल–भारत जोड्ने झोलुंगे पुलमा जाँचको व्यवस्था गरेको हो ।
नाकामा भारतीय स्वास्थ्यकर्मीले नेपालीको एन्टिजेन परीक्षण गरिदिएर जान दिने गरेको खलंगाको पुलघाटका प्रहरी इन्चार्ज गगनसिंह भाटले बताए । ‘पारि एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र अगाडि जान दिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एन्टिजेन नेगेटिभ नभए फर्काइदिने गरेको छ ।’ नाका खुकुलो गरिएयता अहिलेसम्म दुई जना फिर्ता आएको उनले बताए ।
यतिबेला सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट दार्चुला हुँदै युवा कामको खोजीमा भारतका विभिन्न सहरतर्फ गइरहेका छन् । ‘बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्या भयो, बालबच्चा पाल्नैका लागि भारत नै जानुपर्ने बाध्यता छ,’ शैल्यशिखर–४ का रञ्जित बोहराले भने, ‘गाउँघरमा रोजगारी पाइएन, परिवार पाल्न भारतमा गएर मजदुरी गर्नै परेको छ ।’
यो नाकाबाट दार्चुलासँगै, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, कालीकोट, जाजरकोटलगायत जिल्लाका बासिन्दा भारतका विभिन्न ठाउँ जाने गरेका छन् । सडक निर्माण, भारी बोक्ने काम गर्नेहरू सीमावर्ती पिथौरागढलगायत पहाडी क्षेत्रमा मजदुरी गर्न गइरहेको बैतडीको पुर्चौडीका जयभान ऐरले बताए । ‘वर्षौंदेखि इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गरेर घरधन्दा चलाइरहेका छौं,’ उनले भने । कोरोना महामारी कम हुँदै गएपछि भारतमा काम पाइने ठाउँ खुल्न थालेको उनले बताए । भारतमा सार्वजनिक यातायात र रेल सेवा सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न सहर आउजाउ सहज हुन थालेको छ ।
उता कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भारत जान अनिवार्य गरिएको कोरोना परीक्षण रिपोर्टको व्यवस्था हटाइएको छ । सीमामा भारततर्फको हेल्थ डेस्कले गत शुक्रबारदेखि परीक्षण नगराएकालाई पनि जान दिन थालेको हो । सशस्त्र प्रहरीको झलारीस्थित गणका एसपी वीरेन्द्र ऐरका अनुसार शुक्रबारदेखि परीक्षणबिना पनि भारततर्फ जान दिन थालिएको हो । यसअघि परीक्षणबिना भारततर्फ पस्न पूर्णरूपमा रोक लगाइएको थियो । ‘अब गड्डाचौकी नाकाबाट पनि भारततर्फ जान सहज भएको छ,’ एसपी ऐरले भेन, ‘रोजगारी, उपचार र पेन्सनका लागि वारिपारि गर्नेहरू थुप्रै हुन्छन् ।’
गड्डाचौकी नाकाबाट करिब तीन सयभन्दा बढी नेपाली रोजगारी, उपचार र पेन्सनका लागि भारततर्फ जाने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीका अनुसार अहिले गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक ४/५ सय जना भारत पस्ने गरेका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी सीमावर्ती बजारमा उपचार, किनमेल र पेन्सन बुझ्न जाने गरेका हुन् ।
यसअघि गड्डाचौकी नाकाबाट भारत पस्न परीक्षण अनिवार्य गरिँदा रोजगारी र उपचारलगायत विभिन्न कामका लागि जानेहरूलाई निकै समस्या थियो । सुदूरपश्चिमको दुर्गम पहाडी जिल्लाबाट आएकाहरू परीक्षण रिपोर्ट नभएकै कारण नाकाबाट फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो ।
नाकामा परीक्षण रिपोर्टबिना नै जान दिएपछि स्थानीय पनि किनमेलका लागि पारिको बजार बनबासासम्म पुग्न थालेका छन् । ‘अहिले केही सजिलो भएको छ, उपचारका लागि जान पनि निकै गाह्रो थियो,’ भीमदत्त–१० गड्डाचौकीका नरेन्द्र कार्कीले भने, ‘कम्तीमा पैदलै भए पनि पारिसम्म जान दिएको छ ।’ अहिले पनि नाकामा आउजाउ गर्नेलाई सवारीसाधन भने ल्याउन, लैजान दिइएको छैन । नेपालतर्फ भित्रिने भारतीय नागरिकको हकमा परीक्षण रिपोर्टसँगै गृह मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १२:२७